सरकारलाई काम गर्न कसले रोक्यो ? - Himalaya Post
सरकारलाई काम गर्न कसले रोक्यो ?
Posted by Himalaya Post | २२ भाद्र २०७६, आईतवार १३:५८ |
– इन्द्र बानियाँ
सुरुमा अब्बल देखिएको प्रदेश ३ सरकार अहिले हरेक काममा ढिलो हुँदै गएको छ । यो दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश ३ सरकार कमजोर देखिएको छ । व्यवस्थापकीय पक्षबाट मात्र होइन, सरकारको काम गर्ने शैलीबाट पनि यो सरकार असफलताको दिशातिर अघि बढ्दै छ । प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरोस, जनताको भावना अनुसार अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ नै ।
प्रदेश ३ सरकारले गर्ने कुनै पनि काम समयमा हुँदैन । ढिलो हुन्छ, त्यो पनि प्रभावकारी हुँदैन । कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, सडकका कामहरु ‘सिजन अफ’ भएपछि सुरु हुन्छन् । यसबाट जनतालाई दिनु पर्ने सेवा बेलामा दिइँदैन । असारमा टेण्डर खोलिन्छ । जसबाट लक्ष्य पूरा हुँदैन । यसबाट लक्षित वर्गसम्म सेवा पुग्दैन ।
अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग चलायामान हुनलाई रुपैयाँ बजारमा आउनु पर्छ । त्यो हुन सकेको छैन । रुपैयाँ बजार आएपछि मात्र त्यसले लक्ष्य हासिल गर्छ । यसमा प्रदेश ३ सरकार चुकेको छ । बजेट आउँछ, तर खर्च हुँदैन । बजेटमा आएको रकम खर्च हुनुपर्‍यो । तर, यहाँ हुँदैन । जसबाट प्रदेश ३ मा आर्थिक प्रगति हुन सकेको छैन । बजेट छुट्टयाइन्छ, तर काम हुँदैन । जसबाट बजेटमा छट्याएको रकम हामीलाई कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मातझैं भएको छ
प्रदेशको राजधानी नतोकिनु र नामाकरण हुन नसक्नु प्रदेश सरकारको अर्को ठूलो कमजोरी हो । बच्चा जन्माएपछि त्यसको न्वारान गर्नुपर्छ । तर, यहाँ न्वारान गर्ने काम अर्थात् नाम तोक्ने काम भएको छैन । राजधानी तोक्ने काम पनि हुन सकेको छैन ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सपना देखाउने यता मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल दाइले बोल्ने । यहाँ यस्तै भइरहेको छ । काम गर्ने शैली दुई दाइको ठयाम्मै उस्तै छ । कुरा ठूला–ठूला गर्ने काम केही नगर्ने
आफूसँग दुई तिहाइ हुनेले त्यो अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो । तर, प्रदेश ३ सरकारको हकमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । विकास, योजना, समृद्धि र सुख नारामात्र भएको छ । काम हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकार बनेको दुई वर्ष पूरा हुँदा पनि ऐन, कानुन बन्न सकेका छैनन् । अधिकारको सवालमा तीन तहका सरकारवीच बाझिएका विषयहरु टुंग्याउन सकिएको छैन । यो प्रदेश सरकारको अर्को कमजोरी हो । यस अवधिमा कुन सरकारले कति अधिकार पाउने हो, त्यसको टुंगो लगाउनुपथ्र्यो । बाझिएका अधिकारहरु अहिलेसम्म यथास्थितिमै छन् । यी विषयमा आफ्नो आफ्नो ढगंबाट व्याख्या गर्ने काम भइरहेको छ । यसले भोलि द्वन्द्व सिर्जना गर्छ ।
दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश ३ सरकारले आफूले अधिकार र संविधानले दिएका विषयहरु नै टुंग्याउन सकेको छैन । विकास निर्माणका कुरा र कार्यालय संरचना दुस्त, चुरुस्त राख्ने काम भएको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश यातायात विधेयक भर्खरै–भर्खरै मात्र पेश हुँदैछन् । त्यो पनि दुई वर्षपछि बल्ल–बल्ल ।
बाहिर प्रदेश २ सरकारले केही गर्न खोजेको छ भन्ने सन्देश गएको छ, तर त्यस्तो सन्देश प्रदेश प्रदेश ३ सरकारको हकमा गएको छैन । प्रदेश ३ मा सुरु सुरुमा काम छिटो–छिटो भएको थियो । चाँडै प्रदेश सभाको बैठक गर्ने, चाँडै सरकार बनाउने, सभामुख तोक्ने काम पनि प्रदेश ३ मा अरु प्रदेशभन्दा छिटो भएको थियो । तर, अहिले प्रदेश ३ सरकार दिनदिनै पछि पर्दैछ । हरेक सवालमा पछि धकेलिँदै छ । प्रदेश नामाकरण, राजधानी तोक्ने मात्र होइन, प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने कानुन बनाउने विषयमा पनि प्रदेश सरकार ढिलो भएको छ । पहिले देखिएको अब्बलपन अहिले पछि हट्दैछ । यस्तो देखिएको छ कि कामको हिसाबमा प्रदेश ३ सरकार सात वटा प्रदेशमध्ये सातौं नम्बरमा पर्ने अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारको कामलाई छिटो छरितो बनाउन र काम गर्ने तौरतरिका फेर्न हामीले बेला –बेलामा सुझाव दिने गरेका छौँ । जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको भूमिका हामीले निभाएका छौं । तर, प्रदेश ३ सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दैन ।
यो दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश ३ सरकारले दुईपटक बजेट ल्याइसकेको छ, तर, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वनयका लागि आवश्यक संरचना पनि राम्रोसँग तयार भएको छैन । बजेट कार्यान्वनयका लागि, मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गतका विभागहरुमा संरचना बनेका छैनन् । त्यसैले राम्रोसँग बजेट कार्यान्वयन भएको छैन । अहिलेसम्म नियम, कानुन र विधेयकहरु टुंग्याउदै जानुपर्ने हो, तर त्यो हुन सकेको छैन ।
प्रदेश ३ सरकार र सत्तारुढ दल नेकपा आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलिएको छ । यसबाट प्रदेश सरकारले जति गति लिन् पर्ने हो, त्यो गति लिन नसकेको हो । दुईपटक वजेट आउँदा पनि राजधानी कहाँ राख्ने, यसको टुंगो लगाएको छैन । राजधानी रहने ठाउँमा सेनाको पृतना, सशस्त्र प्रहरीको संरचना बस्छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीले पनि प्रदेश संरचना बनाउँछ । राजधानीको टुंगो नलाग्दा सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीमा पनि अन्योल छ ।
मुलकमा तीन तहका सरकार भए पनि जनताको काम हुन सकेको छैन । जनताको घरदैलोमा सरकार भन्ने नारा छ । एउटा सरकारले नहेरे, अर्को सरकारले हेर्छ भन्ने गरिन्छ । तर, त्यस्तो महसुस जनतालाई छैन । केन्द्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार छ । प्रदेश ३ मा दुई तिहाईभन्दा पनि बढी छ । ११० सदस्यीय प्रदेश ३ प्रदेश संसद्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति ८१ छ । जब कि दुई तिहाइ पुग्न ७४ जना भए पुग्छ । कांग्रेसका सांसद २१ जना मात्र छन् । अरु साना दलको उपस्थिति ६र७ जना मात्र छ । यति ठूलो संँख्या हुँदाहुँदै प्रदेश ३ सरकारलाई काम गर्न कसले रोक्यो ?
संविधानमै प्रदेशको राजधानी र नामाकरण प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । दुई वर्षसम्म यसको टुंगो नलाग्दा प्रदेश सरकारको क्षमता र प्रदेश सरकारको काम गर्ने शैलीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
जनतामा प्रदेश सरकार भएको महसुस हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार बने पनि जनताको जीवनमा परिवर्तन आएको छैन । राजनीति परिवर्तन भयो । तर, तीन तहको सरकार भाषण मात्र भएको छ । व्यवहार र बोलीमा जनताले राहत भन्दा आहात भोग्न थालेका छन् । अस्थिरता र असुरक्षताको स्थिति कायमै छ ।
केन्द्रले समयमै प्रहरी ऐन बनाएको भए प्रदेश सरकारलाई यसको बाटो खुल्थ्यो । प्रदेश प्रहरी भएको भए प्रदेशमा कुनै घटना हुने घटना हुने वित्तिकै प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले हेथ्र्यो । त्यो प्रदेश सरकारको जिम्मेवारभित्र पथ्र्यो । तुरुन्त एक्सन जाने अवस्था हुुन्थ्यो । संविधानले दिएका केही अधिकारहरु अझै प्रदेश सरकारहरुले पाउन सकेका छैनन् । जसबाट प्रदेश सरकारप्रति जनताको आकर्षण बढेको छैन । जनतामा प्रदेश सरकार किन चाहियो, केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार भए भइहाल्यो भन्ने मनस्थिति आएको देखिन्छ । प्रदेश सरकार प्रभावकारी नहुँदा यस्तो मनस्थिति पैदा भएको हो ।
प्रदेश सरकार बने पनि बाटो, बत्ति, खानेपानी जस्ता समस्या उस्तै छन् । प्रदेश सरकारप्रति जनतामा आकर्षण ल्याउन प्रदेश सरकारले नयाँ–नयाँ योजना र कार्यक्रम बनाई लक्षित र कमजोर वर्गप्रति जानुपथ्र्यो । त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले ठूला–ठूला समूह (फर्म) हरुलाई कृषिमा काम गर्न भनी करोडौं रुपैयाँको अनुदान दिएको छ । एकैपटक करोडौं अनुदान दिँदा त्यसमा भ्रष्ट्राचार हुन सम्भावना हुन्छ । त्यस्ता ठूला व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण (सफ्ट लोन) दिनुपर्ने हो । अनुदान त दुईरचारवटा बाख्रा भएका, दुईरचारवटा राँगा, अलिकति तरकारी खेती गर्ने, कुुखुरा पालन गर्ने जस्ता साना–साना किसानहरुलाई दिनुपर्ने हो । तर, प्रदेश ३ सरकारले ठूला–ठूला व्यवसायीलाई मात्र अनुदान दिएको छ । त्यस्तो अनुदान लाखौंमा होइन, करोडौंमा छ । यो राम्रो चलन होइन । ठूला व्यावसायीलाई सहुलियतमा ऋण दिनुपर्छ, करोडांैको अनुदान होइन ।
सरकारको यस्तो कामबाट प्रदेश सरकारप्रति जनताको भरोसा बढेको छैन । उल्टै निराशा पैदा भएको छ । संघीयता लागु भएपछि जनताले जस्तो आशा गरेका थिए, तर अहिले त्यस्तो महसुस गर्न पाएका छैनन् । यसको उदाहरण हो, एउटा सानो विषयमा पनि जनता विद्रोहमा आएझैं ठूलो संख्यामा सडकमा आउँछन् । यो भनेको व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा कमजोर हुँदै जानु हो । प्रदेश सरकारप्रति जनतामा निराशा पैदा भएको छ ।
सहमति, सहकार्यमा संविधान जारी भएको हो । संविधान जारी भएपछि सहमति सहकार्य हुन सकेको छैन । अहिले नेकपाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार चलाएको छ । जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतमा हामीले आवाज उठाउँदा पनि सरकार एकलौटी ढंगबाट हाम्रो कुरा नसुनी अघि बढिरहेको छ । यसबाट सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भने जस उहाँहरुले नै लिनुहुन्छ । नराम्रो काम गरे पनि अपजस उहाँहरुले नै भोग्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेकोमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकार बनाउने दल पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुनेछन् ।
(पूर्वगृहराज्यमन्त्री एवं प्रदेश ३ का प्रमुख विपक्षी दलका नेता बानियाँ नेपाली कांग्रेस मकवानपुर जिल्ला सभापति हुन्)
Previousभारतद्वारा काठमाडौंमा शैक्षिक संस्था निर्माण
Nextडेढ वर्षदेखि कामचलाउ समितिको भरमा खानेपानी संस्था
त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठी चढेको गाडीमा आगजनी
२ फाल्गुन २०७३, सोमबार ०७:०३
कुन प्रदेशमा कसको नेतृत्व ?
९ माघ २०७४, मंगलवार ०९:०४